बच्चाको घाँटीमा कुनै चिज अड्कियो ? अपनाउनुहोस् यी उपाय - बच्चाको घाँटीमा कुनै चिज अड्कियो ? अपनाउनुहोस् यी उपाय -
बच्चाको घाँटीमा कुनै चिज अड्कियो ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
काठमाडौँ । साना बच्चाहरूलाई इनर्जी बल भनिन्छ । तिनीहरू नयाँ चिज बारेमा धेरै उत्साहित हुन्छन । २४ घण्टा नै बच्चामाथि नजर राख्न सम्भव छैन र यसैले यति धेरै गल्ती हुन्छन् कि आमा बुबाले तुरुन्त डाक्टरलाई भेट्नु पर्ने हुन सक्छ । हरेक बच्चा अर्को भन्दा फरक हुन्छ र त्यसैले प्यारेन्टिंग नियमहरू पनि सबैका लागि फरक हुन्छन् । तर पालनपोषणका केही नियमहरू छन् जुन प्रत्येक बच्चाको लागि एक समान रहन्छ।
केही बच्चाहरूले केहि खानु र पिउनको लागि हेर्छन् र त्यसतिर उफ्रन्छन् । धेरै चोटि खानेकुरा र खाना बच्चाको घाँटीमा अड्कन्छन् जब उनीहरू ध्यान पाउँदैनन्, जसको कारण उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ वा उनीहरू खोकी र छादन थाल्छन्।
साना बच्चाहरूलाई कहिल्यै भान्छाघर वा खाना र पेय पदार्थको वरिपरि नराख्नुहोस् । यदि बच्चा १ बर्ष भन्दा कम उमेरको छ र उसको घाँटीमा खाना वा केही अड्किएको छ भने तपाईले घरमै प्राथमिक उपचारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो पनि याद राख्नुहोस् कि यदि तपाईले तत्काल राहत पाउनु भएन भने, डाक्टरसँग परामर्श गर्न ढिलाइ नगर्नुहोस्।
१. बच्चाको घाँटीमा कुनै चीज अड्याउँदा चिन्तित वा चिच्याउनुको सट्टा शान्त र बुद्धिमानीपूर्वक कार्य गर्नुहोस्।
२. बच्चालाई आफ्नो काखमा राख्नुहोस् र त्यसपछि बच्चाको मुख तल गर्नुहोस् र त्यसलाई तपाईंको काखमा राख्नुहोस्। यस समयमा, उनको टाउको र घाँटी राम्रोसँग सहारा गर्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि बच्चाको टाउको उसको छातीको तह भन्दा कम हुनुपर्छ ।
३. हत्केलाका साथ, बच्चाको काँधको बिचमा थप थपाउनुहोस् । यसले घाँटीमा अडीरहेको चीजलाई हटाउनेछ।
४. यदि यो यसरी बाहिर आउँदैन भने, बच्चालाई सिधा सुत्नुहोस् । तपाईंको दुई औंलाहरूको सहयोगमा, बच्चाको छाती हल्का प्रेस गर्नुहोस्। धेरै कडा प्रेस नगर्नुहोस् । यस प्रक्रिया ५–५ पटक दोहोर्याउनुहोस्।
५. साना बच्चाहरूलाई गाजर, स्याउ वा अन्य ठोस फलहरू, नटहरू, क्यान्डी वा च्युइंग गम र पपकोर्न जस्ता चीजहरूको साथ खान नदिनुहोस् ।
फरक व्यक्ति फरक यौन समस्या